Soo dejisan RIOT 0.6.2 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaRIOT
Bogga rasmiga ah: RIOT
RIOT – waa adeeg yar oo lagu hagaajinayo xajmiga sawirka ujeedada ah in lagu helo internetka. Software waxay taageertaa qaabab badan oo muuqaalka muuqaalka ah oo loo bedeli karo JPG, GIF ama PNG. RIOT waxay kuu ogolaaneysaa inaad sheegto cabbirka sawirada lagama maarmaanka ah iyo aragti ahaan is barbardhigta asalka adigoo isticmaalaya sawir la culeeysey iyadoo la adeegsanayo qaab laba-daaqad ah iyo isbarbardhig pixel-by-pixel. RIOT waxay awood u leedahay inay ku cadaadiso sawirada mugga la bixiyay, la qabsado iftiiminta ama is-beddelka, bedelida ama tirtirto metadata, xakameyso tirada midabada, iwm. Nidaamku si toos ah ayuu u shaqeyn karaa sawirrada iyada oo la adeegsanayo goobaha caadiga ah ama manfaca lagu aasaasay oo dhammaan goobaha lagu hagaajinayo isticmaalaha. RIOT sidoo kale wuxuu taageersan yahay isbedelka looxaanta ee sawirrada iyo wuxuu leeyahay interface interface.
Cabbiraadda muuqaalka ee cabbirka qeexan
Isbarbardhigga asalka ah ee muuqaalka sawir la yareeyey waqtiga dhabta ah
Dejinta sawirrada muuqaalka
La shaqee metadata
Faylka faylasha ee loo yaqaan ’split file’
Soo dejisan RIOT
Faallo ku saabsan RIOT
RIOT Xirfadaha la xiriira